Nezvedu - Shijiazhuang damei kingmech pump Co., Ltd.
Damei Kingmech Pump Co, Ltd. inyanzvi Chinese pombi inogadzira mapombi emaindasitiri. Tichiomerera kunheyo yekupa kune vatengi mhando yemidziyo inoda, kambani yedu yakagadzira mhando dzakapfuma dzekupomha michina uye zvikamu, senge slurry pombi, API 610 mapombi, makemikari mapampu, tsvina mapampu, magineti ekutyaira mapombi uye akachena mapombi emvura. Zvese zvigadzirwa izvi zvakashandiswa zvakanyanya mukuchera, simbi, kuchera marasha uye petrochemical kugadzirwa, kugadzira simba, kupa mvura uye sewage drainage uye kurapwa uye nezvimwe. Hunhu hwavo hwakanaka uye hwakavimbika kwazvo mashandiro avabatsira kukunda matrust uye nyasha kubva kune vatengi. Zvichakadaro, mavharuvhu epombi yemhando yepamusoro uye nezvimwe zvinoenderana nazvo zviripo kune vashandisi.
Fekitori yedu yakavambwa muna 2007 uye yakaumba chikero che "3.13.30.300", kureva., 3 zvigadziko zvekugadzira, makore gumi nematatu zviitiko zvakapfuma, mainjiniya makumi matatu, mazana matatu akavimbika vatengi. Inotsigirwa neane hunyanzvi timu yehunyanzvi ine hunyanzvi hwekugadzira pombi, prototyping uye kuyedza, DAMEI yakakura nekukurumidza mumakore apfuura uye yakagadzira hupfumi hwemhando yepamusoro yekupompa michina zvinoenderana nekuchinja kuri kudikanwa kwemusika. Sezvo zvigadzirwa zvedu zvinokwezva zvinowedzera kubva kune vatengi vepasirese, isu tinotanga kumisikidza timu yehunyanzvi yevatengesi vanobvunza Iwo akanakisa mu - saiti kuongororwa uye kugadzirisa matambudziko, achikubatsira nemidziyo yekuongorora, kuenderana kwemapombi nemamota, kutumirwa kwepombi masisitimu.
Hofisi yemusoro wekambani yedu iri muShijiazhuang guta, inovhara nzvimbo yepasi ye750m2. Zvino, vanopfuura makumi maviri vashandi vevashandi vari kushanda ipapo. Miti mitatu yatakagadzika iri munzvimbo yeShijiazhuang (slurry pump), Dalian (kemikari pombi), Shenyang (API 610 Petro-pombi), imwe neimwe inogadzira mapombi zvichienderana neiyo ISO9001, QA / QC standard, CE Maka , IQNet mucherechedzo uye mamwe emukati maindasitiri standard. Zvese zvitatu izvi zvirimwa zvakagadzirirwa nemashopu emazuva ano uko kune zvigadzirwa zvemberi zvekugadzira, kuungana, kuyedza uye kugadzirisa. Ruzivo rwakadzama nezve ivo runyorwa pazasi:
1.Shijiazhuang fekitori: general space floor: 8000m2, mashopu: 2200m2, vashandi: 30;
Fekitori 2.Dalian: yakazara nzvimbo pasi: 20000m2, mashopu: 10000m2, vashandi: 120;
3.Shenyang fekitori: musangano: 1600m2, vashandi: 30.
4. Yese: mashopu: 13800m2, vashandi: 180.
Kubva pakagadzwa, kambani yedu yanga ichitevedzera musimboti wekupa mhando dzakapfuma dzemapombi. Zvichienderana neruzivo rwemakore edu muR & D uye kugadzirwa kwemapombi, isu takagadzira mhando nyowani dzemapombi uye zvikamu, senge mapampu akagadzirwa neye hi-chrome zvinhu uye A09, Ti uye Ti alloy mapombi nemavharuvhu, yakatwasuka maputi pombi, hombe BB2 mapampu ane self lubrication chiteshi (akashongedzerwa neKingbury mabheyaringi) pamwe nekabhoni yesilicon mabheyari eVS4 pombi. Sezvo timu yedu yeR & D yaita budiriro mumatambudziko akati wandei ehunyanzvi, isu ikozvino taigona kupa kumakomba mapampu ayo anofarira simba rakakura re1000kW uye musoro wepamusoro we1000m uye anoshanda mushe pane tembiricha yakakwira ye400 ° C. Dzimwe pombi dzehukuru hukuru dzinozogadzirwa mune ramangwana, kusangana nevatengi 'zvinowedzera zvakanyanya zvinodiwa zvekupomba michina.
Nekuda kwehunhu hwavo hwakanaka, mhando dzakapfuma pamwe nekuita kwakanyanya kuvimbika, zvigadzirwa zvedu zvakaendeswa kumisika yekunze, seCanada, US, UK, France, Australia, Czech, Poland, South-Africa, Argentina, Indonesia, Philippines , Kazakhstan, UAE, Pakistan uye nezvimwewo panguva imwecheteyo, isu takaumba hukama hwekudyidzana nemakambani mazhinji epasi rese seAnglo American plc., Barrick Gold Corporation, BHP Billiton Ltd, Philex Mining Corporation, newmont africa mining Plc., KAZ Minerals, Kazzinc Boka neIndia Aluminium yekuchera uye Fatima Fertilizer Company Limited uye zvichingodaro.
Makore mapfumbamwe apfuura aona kuedza kwedu kukuru muR & D uye kugadzira pombi uye zvikamu. Nekudaro, pasina kuvimba kwako uye rutsigiro rwakasimba, hatingazombowana izvo zvatiinazvo kana kuva zvatiri. Naizvozvo, mune ramangwana rinouya, isu tichanyatso shanda nesimba mukugadzira uye kugadzira zvimwe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nekupa mamwe mabasa ekufunga uye anotarisirwa nevatengi kwauri, tichifambira mberi munzira yedu kuenda pakubudirira kukuru.